WASAARADA CADAALADA PUNTLAND OO SOO GABAGABAYSAY AFUR SIINTA KUN QOYS OO KU NOOL GAROWE – Wasaaradda cadaaladda, Arima Diinta iyo Dhaqan celinta Dawladda Puntland Somalia
Posted on 3rd July 2016 4th July 2016 Author Mohamed salad (Ramaas Software)	Comment(0)
Wasarada cadaalada arimaha diinta iyo dhaqan celinta dowlada puntland ayaa garowe ku soo gaba gabaysay afursiinta kun qoys waxayna 70,kii qoys ee ugu dambeeyay manta gudaha wasarada ku gudoonsiisay deeq isugu jirta Bur.Baris,Sonkor,Caleen,Timir iyo Saliid kuwaas oo ay wasaradu ugu talagashay inay ku afuraan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan.
Daddka looqaybiyay deeqda raashinka ah ayaa ahaa daddkii yamaniyiinta ahaa ee ka soo qaxay dagaaladii ka dhacay dalka yaman waxaana deeqda bixinaysa haayada khayriga ah ee cuman.
Qaarkamida todobaatankii qoys ee wasaradu u qaybisay raashinka ayaa u mahadceliyay madaxada wasarada cadaalada puntland iyo haayada khayriga ah ee cumaan waxyna sheegeen inay ka farxiyeen ilaahayna uga baryayaan deeqdaan ay soo gaarsiiyeen inuu ugu badalo wax ka khayr badan.
Wasarada cadaalada arimaha diinta iyo dhaqan celinta dowlada puntland Salax xabiib jamac ayaa sheegay in todobaatankan qoys ee manta loo qaybiyay deeqda raashinka ah ay ka mid yihiin kun qoys oo ay wasaardu u qaybinaysay deeq waxaana uu sheegay wasiirku inay kunka qoys ee ay deeqda u qaybiyeen isugu jireen maxaabiis iyo dadd danyar ah oo ka soo barakacay qaybo kamida yamaniyiintii ka soo qaxay dalka yaman.
Wasiir salax ayaa u mahadceliyay masuuuliyiinta haayada khayriga ah ee cuman waxaana uu sheegay in wasaaradu masuuul uga ahayd haayada inay ogaato in sidii loogu talagalay afursiintu u gaarto qoysakii ay haayadu ugu tala gashay.
Haayada khayriga ah ee cumaan oo ah haayad laga leeyahay dalka cumaan ayaa sanad walba marka la gaaro bisha barakaysan ee rabadaan waxy afursiin u samaysaa Lix kun oo qoys kuwaas oo kukala sugan magaalooyinka garowe,gaalkacyo,qardho iyo bosaso.
Posted on 20th August 2016 20th August 2016 Author Mohamed salad (Ramaas Software)
Posted on 23rd July 2015 31st August 2015 Author Mohamed salad (Ramaas Software)
Wasaradda Cadaalada iyo Diinta Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah gaari loogu talo galay inuu u shaqeeyo maxkamadda degmada Eyl ee Gobalka Nugaal ku wareejisay mamulkaasi, waxana gaarigan wasaradda soo gaarsiisay Hay’adda DDG. Munaasibadda gaarigan ay wasaradda Cadaalada ku wareejinaysay Maxkamadda Eyl ayaa lagu qabtay xarunta wasaradda, waxana kasoo qayb galay masuuliyiin ka socda dowladda, […]
Posted on 19th April 2019 Author admin1